SHUN LEI WAI - Myanmar Classifieds, Hotels in Myanmar, Resturants in Myanmar, Jobs in Myanmar
Shun lei wai ( ကွျောငွာအားလုံးကွညျ့ရနျ )
Shun Lei Wai Gems Art Store offers the best quality of Myanmar Handicrafts: Gems Paintings, Wood Carvings, Lacquer Wares and so many other handicrafts. As we specialize in Gems Paintings, we can also design and create paintings of your needs. We guarantee in price and quality of our products as we are the one of the largest suppliers in yangon region. Please visit our show room at No. 25 Ground Floor Sanchaung Street, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.
ရွှန်းလဲ့ဝေ ကျောက်ပန်းချီနှင့်လက်မှုအနုပညာပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်တွင်ကျောက်ပန်းချီ၊ကနုကမာနှင့်ကျောက်စ်ိမ်းပန်းချီ၊ရွှေချည်ထိုးအမျိုးမျိုး၊ ယွန်းထည်အမျိုးမျိုး နှင့်အခြားသောလက်မှုပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ရ၇ှိနိုင်ပါသည်...သင့်စိတ်တိုင်းကျ ကျောက်ပန်းချီ အမျိဲုးမျိုးနှင့် ပုံတူ ပန်းချီများလဲရရှိနိုင်ပါသည်။လက်ရာနှင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော လက်မှုပစ္စည်းများကို အမှတ်(၂၅)၊စမ်းချောင်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို.နယ်၊ ရန်ကုန်မြို.တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Store Hours: 9am - 7pm (Mon-Sun)
Phone: 01-536790, 09-5109257